MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardData Carry Plus FAQ MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
PROMOTION »Data Carry Plus
၁ .Data Carry Plus ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုဝယ်ယူလို့ရနိုင်မှာလဲ?
Data Carry Plus Pack ဆိုတာ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် ဒေတာအသုံးပြုနိုင်သော Package များဖြစ်ပြီး ပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့်သက်တမ်းကိုပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ Data Carry Plus Pack ဝယ်ယူတိုင်း 1Ks/MB နဲ့ ဒေတာသုံးလို့ရမယ့်အပြင် 400 GB အထိ ကံထူးခွင့်များရရှိနိုင်မှာပါ။
ဈေးနှုန်း [ကုန်သွယ်ခွန်ပါဝင်ပြီး] ဒေတာပမာဏ Lucky Data သက်တမ်း ၀ယ်ယူရန်
699 Ks 415 MB Data Carry ဝယ်ယူတိုင်း 400GB အထိ ကံထူးနိုင်မည့် အခွင့်အရေး! ၃၀ ရက်
[သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက် အတွင်း ဒေတာသယ်ဆောင်ခွင့် ရှိသည်] *777*1#
799 Ks 630MB *777*2#
999Ks 905MB *777*3#
1299 Ks 1180 MB *777*4#
1799 Ks 1630MB *777*5#
2699 Ks 2450 MB *777*6#
4,499 Ks 4100MB *777*7#
8,999 Ks 8200MB *777*8#
17,999 Ks 16400MB *777*9#
26,999 Ks 24500MB *777*0#
၂။ ပက်ကေ့ချ်ဈေးနှုန်းများမှာ အခွန်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသလား?
ပက်ကေ့ချ်ဈေးနှုန်းများမှာ အခွန် ၅% ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Data Carry Plus Pack ကို ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများနှင့် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ CDMA နှင့် Base Tariff အသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၄။ Data Carry Plus Pack ဝယ်ယူပါက ဘာတွေကံထူးနိုင်မှာလဲ?
Data Carry Plus Pack ဝယ်ယူတိုင်း 400 GB အထိ ကံထူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ သောကြာနေ့မှာ Data Carry Plus Pack ဝယ်ယူပါက ကံစမ်းခွင့်ရရှိမှာပါလား?
သောကြာနေ့တွင် Data Carry Plus ဝယ်ယူပါက Happy Friday အပိုဆောင်း ဒေတာ (MBs) များရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ကံထူးထားတဲ့ဒေတာကို ဘာတွေသုံးလို့ရမှာလဲ?
ကံထူးထားတဲ့ဒေတာကို အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် (၇) ရက်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၇။ လက်ကျန်ပမာဏကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မှာလဲ?
*224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့် ကံထူးထားသောဒေတာ လက်ကျန်ပမာဏကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတ
၈။ Data Carry Plus Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပက်ကေ့ချ်ဒေတာပမာဏနှင့် သက်တမ်းကိုလည်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာသက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကိုလည်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
၉။Data Carry Plus Pack ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
Package တစ်ခု၏ သက်တမ်းက (၃၀)ရက်ဖြစ်ပြီး ဒေတာသယ်ယူနိုင်သောကာလမှာ (၇)ရက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာသယ်ယူနိုင်သောကာလတွင် Pack အသစ်ဝယ်ယူပါက ပက်ကေ့ချ်ဒေတာပမာဏကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာကို (၇)ရက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကိုလည်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
၁၀။ ဒေတာသယ်ဆောင်နေသော ကာလအတွင်းမှာ အသုံးမပြုရသေးတဲ့ ဒေတာတွေက ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှာလဲ?
ဒေတာသယ်ဆောင်နေသော ကာလ (Package ၏ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး (၇) ရက်) အတွင်းမှာ ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်ဒေတာများကို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုကာလအတွင်း Package အသစ်တစ်ခုဝယ်လျှင်အသုံးပြုရန်ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်ဒေတာပမာဏကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာသက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကိုလည်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
၁၁။ Data Carry Plus Pack ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါသလား?
*106*2# (သို့) *777# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2. Gift (သို့) 2.လက်ဆောင်ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၁၂။ ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်အထိလဲ ?
၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ။